Kulanka uga socda Sirta, Libya ururka Midawga Afrika oo looga hadlayo xaaladda dalka Somaliya. [Akhris …] – Radio Daljir
Sirta, June 29 | Kulanka ka furmay magaalada Sirta ee dalka Libya Ururka Midawga Afrika ayaa waxa ugu weyn ee ay ka wada hadlayaan Waddamada Afrikaanka waxaa ay tahay xaaladda dalka Soomaaliya oo iminka ah mid aad u qallafsan.
Kaddib markii ay dalka ay ku soo rogtey xaalad deg deg ah dawladda KMG ee Soomaaliya ayaa waxaa socda dadaallo ay ku dooneyso dawladda KMG ee Soomaaliya in dalka Soomaaliya la keeno ciidammo nabad ilaalin ah.
Shariif Xasan Sh Aadam oo ah ku xigeenka Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya isla markaana ah Wasiirka Maaliyadda ee DFKMG ee Soomaaliya ayaa waxaa uu gaarey Libya halkaas oo uu uga qeyb galayo dawladda KMG ee Soomaaliya, si uu uga codsado dawladda Itoobiya iyo dhammaanba waddamada kale ee Afrika in ay ciidammo nabad ilaalin ah ku keenaan dalka Soomaaliya.
Itoobiya ayaa horraantii sanadkaan ka baxdey dalka Soomaaliya, waxaana Labo toddobaad ka hor ay dawladda KMG ee Soomaaliya ay baaq u dirtey dawladda Itoobiya si ay ciidamadeeda u soo geliso geyiga Soomaaliya maaddama aysan dawladda isaga filneyn mucaaradka ka soo horjeeda, waxaana ay dawladda Itoobiya ay sheegtey in aysan heysan wax fasax ah.
Kulanka ka furmaya magaalada Adis Ababa ayaa waxaa uu yahay Ajandaha looga hadlayo xaaladda Geeska Afrika oo ah mid haatan Cakirran, kaddib markii caasimadda Soomaaliya ay ku sii xoogeysteen kooxo mayal adag oo ka soo horjeeda dawladda KMG ee Soomaaliya.
Wasiirka Maaliyadda Shariif Xasan Sh Aadan oo wareysi siiyey VOA ayaa sheegey in 2,000 oo dagaalyahaniin Ajaaniib ah ay taakuleynayaan kooxda Al Shabaab ee dooneysa in ay si awood ah ay kula waregto dalka Soomaaliya.
Horey ayaa Midawga Afrika waxaa ay ahayd in ay u keeneen dalka Soomaaliya ciidammo nabad ilaalin ah oo gaaraya illaa iyo 8,000 oo Askari, waxaana tallaabadaasi looga fadhiyey dhawr sano illaa iyo iminkana wax ka hirgalay ma ay jiraan inkasta oo kala badh ciidamadaasi ay ku suganyihiin dalka Soomaaliya ayaa waxaa ay ku koobanyihiin gobo khaas ah oo ku yaalla caasimadda halkaas oo ay ka hayaan ilaalo gaar ah.